3M Waxay ka qayb qaadatay Bulshadda | Saint Paul Historical
“Ku tabaruca, iyo ka qayb galka mashaariicda madaniga ah, 3M iyo shaqaalaha 3M waxay caawisay inay xoojiso xidhiidhka ah xidhiidhka bulshadda. Sifadan qaarka ah ee tabaruca 3M ee bulshooyinka badan taas oo ay qayb ka tahay, waa fursada iyo xamaasada shaqaalaha 3M ay ku galaan qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada kala duwan iyo hawlaha.” — 3M Mekerefoonka, Juulay 1953
Shaqaaaha 3Mers waxxay bixiyeen dhiig
Shirkadu waxay la dhistay barnaamijka deeqda dhiiga Laan qayrta Cas Qaybta ururinta dhiiga ayaa u timid warshada si caadi ah.
3M iyo Dugsiyada Sare ee Maxaliga ah
3M waxay la shaqaysay dugsiyada maxaliga sida Dugsiyada Sare ee Johnson iyo Harding si ay u shaqaalayso shaqaale. Dhalinyrada raga iyo haweenka waxay shaqayn karayeen nus gelin iyagoo weli ku jira dugsiga, ka dibna u wareegayeen shaqooyin wakhti buuxa ah ka dib qalan jebinta.
3M Iyo Guul gaadhida Curdinka ah
3M waxay siisay la taliyayaal barnaamijka Guul gaadhida Curdinka ah ee Saint Paul. Barnaamijka waxa uu siiyay khibrad ganacsiga dhabta ah ardayda dugsiga sare isagoo ku caawiyay iyaga inay dhisaan ganacsiyadooda.
Elsie Brandhorst sanadkii 1941 ~ Source: Minnesota Historical Society
Naadiga 3M iyo Kooxda 3Mwaxay ahaayeen ka qayb gale firfricoon Karnifaalkii Jiilaalka ee Saint Paul. 3M Club float, 1938 ~ Source: Minnesota Historical Society
3M blood drive, 1952: Shirkadu waxay la dhistay barnaamijka deeqda dhiiga Laan qayrta Cas Qaybta ururinta dhiiga ayaa u timid warshada si caadi ah. ~ Source: Minnesota Historical Society
Archibald G. Bush wuxuu hambalyaynayaa Shaqaalaha Guusha gaadhay : 3M waxay siisay la taliyayaal barnaamijka Guul gaadhida Curdinka ah ee Saint Paul. Barnaamijka waxa uu siiyay khibrad ganacsiga dhabta ah ardayda dugsiga sare isagoo ku caawiyay iyaga inay dhisaan ganacsiyadooda. ~ Source: Minnesota Historical Society
Johnson High School, 1930: 3M waxay la shaqaysay dugsiyada maxaliga sida Dugsiyada Sare ee Johnson iyo Harding si ay u shaqaalayso shaqaale. ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “3M Waxay ka qayb qaadatay Bulshadda
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/391.